Nepal: Fiaingana vaovao miaraka amin’i Madhav Kumar Nepal ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 14:04 GMT
Ny praiminisitra Madhav Kumar Nepal © Utudanuki, Wikipedia.
Taoriana herinandro maro niadiana varotra teo amin'ireo antoko politika nepaley, “voafidy” handray ny andraikitra Praiminisitra ao Nepal i Madhav Kumar Nepal, ilay mpitarika kaominista efa za-draharaha ary sekretera jeneraly taloha tao amin'ny Antoko kaominista nepaley (marksista sy leninista mitambatra) na PCN (MLU). Arahina andiana olana maro ny toerana misy an'i Atoa Nepal, indrindra amin'izao fotoana izao – izay mety hanonganan'ny sasany amin'izy ireo ny governemantany.
Voalohany ao amin'ny lisitry ny laharam-pahamehany ny politika ivelany. Vao namerina nifidy ny fiaraha-mitantana tarihan'ny Antokon'ny Kaongresy i India ary mampiseho fahalianana lehibe ho an'ny toerana stratejika misy an'i Nepal ao amin'ny faritra i Shina. Maneho hevitra momba ireo ”laharam-pahamehan'ny Praiminisitra nepaley amin'ny lafiny politika ivelany” io i Nishchal N. Pandey ao amin'ny tranonkala NepalNews [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra, afa-tsy raha misy fanamarihana mifanohitra amin'izany] :
Namela soritra teo amin'ny fahefana sy ny fahamendrehan'ny fanjakana nepaley iray manontolo ny fomba fanambaniantenan'ny mpitondra antsika amin'ny famerenana lalandava ireo fahadisoana efa nataony, izay ny fihaonana matetika amin'ireo iraka vahiny mba hangatahana torohevitra momba ny lohahevitra politika ato anatiny. Noho izany, ny fanasana ny Praiminisitra indiana Man Mohan Singh sy ny Filoha sinoa Hu Jintao mba hitsidika azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny fotoana mety amin'izy ireo no tokony ho voalohany amin'ireo laharam-pahamehan'ny Praiminisitra vaovao Madhav Kumar Nepal. […]
Ny fanarenana indray ny fitantanantsika ny raharaha iraisam-pirenena no tokony ho laharam-pahamehana faharoa.
Tsy maintsy hiatrika ny tsy fahafalian'ireo maoista ihany koa Atoa Nepal. Mpikambana tao amin'ny governemantan'ny fiarahamitantana notarihin'ny antoko maosita ny antokony sangy, rehefa tonga ny olana fandroahana ny lehiben'ny tafika Rookmangud Katwal, nanapaka hevitra ny tsy hanohana ilay hetsiky ny mpiady anaty akata taloha izy – izay nandray anjara tamin'ny fionganan'ny fanjakana notarihan'ireo maoista ihany ny farany.
Tezitra noho ity fiadiana fahefana ity ilay amerikana blaogera kaominista , Robert Lindsay:
Ny fitondrantenan'ireo antoko kaominista nepaley hafa, izay nandà ny hiaraka hiasa amin'ireo maoista ary nirona tany amin'ny fanjakan'ny tompomenakely, monarsisma sy ireo ‘réflexes’ no tena mahatsiravina. Efa nipetraka tao amin'ny parlemanta nandritra ny folo taona mihoatra tany amin'ny taona 90 tany ireo antoko ireo ary tsy mbola nahavitra na inona na inona. Miteniteny foana fotsiny.
Tadidiko tsara fa avy ao India ireo Madhesis ary monina ao amin'ny farany Atsimon'ny firenena akaikin'ny sisintany indiàna. Hindoïsta mafana fo ireo ary toa tia fironana miandany amin'ny fisintahana. Tadidiko fa toa mitovy amin'izany ihany ireo Terai (vondrona ara-poko), fa tsy dia tena azoko antoka loatra.
Ny Antoko kaominista nepaley (marksista sy leninista mitambatra ) na ny PCN (MLU) no anaran'ny iray tamin'ireo antoko kaominista namadika palitao.
Mandritra ireo fivorian'ny antenimieran'ny lalàm-panorenana, manohy ny fanehoana ny tsy fanekeny ireo maoïsta , izay, araka ny olona sasany, manakorontana ny fandehan'ny fanoratana ny lalàm-panorenana. Nanambara i Atoa. Nepal, avy hatrany taorian'ny nanaovany fianiànana handray ilay toerana, fa ny fanoratana ny lalàm-panorenana no laharam-pahemehany voalohany indrindra.
Mitodika amin'ny firenena i Atoa. nepal ao anatin'ity lahatsary ity, amin'ny teny nepaley, taorian'ny nandraisany ny toerany. Nisisihany indrindra ny ”fametrahana ilay lalàm-panorenana vaovao ary ny fitondrana ny dingana ho amin'ny fandriam-pahalemanana ho any amina fiafarany mitombina”
Avoakan'i Barun Royo ao amin'ny blaogy Beacononline, ny lahatsoratra avy ao amin'ny tranonkala Expressbuzz.com momba ireo maoïsta , izay lazaina fa toa manakana ny fandrosoan'ireo fivorian'ny antenimeran'ny lalàm-panorenana :
Manana birao lehibe ahitana mpikambana telo ilay Praiminisitra kaominista vaovao Madhav Kumar Nepal, izay nisolo ilay maoïsta Pushpa Kamal Dahal Prachanda tamin'ny Alatsinainy. Nahatonga ilay fahataràna tao amin'ny famoronana birao feno ny fifandirana anatiny tao amin'ny antokony, sy tamin'ireo mpikambana fototra ao aminy.
Na milaza aza i Madhav Kumar fa ny laharam-pahamehany voalohany dia ny manoratra lalam-panorenana vaovao mialohan'ny fahavaratra manaraka, tsy hamela izany ho tanteraka ny fanoherana maoïsta miha-mitombo.
Toa sarotra ho an'ny Praiminisitra Nepal ny hiaraka hiasa amin'ireo maoïsta. Ho sarotra ho azy ihany koa ny famaliana ny fangatahan'ny vahoaka, indrindra satria miahiahy tamin'ny ”fisafidianana” azy sy ny zavatra mety ho vitany ao amin'ny tontolon'ny tsy fahamarinantoerana politika ankehitriny ireo Nepaley.
Toy izao no fomba fitsaran'ny vahoaka [amin'ny teny nepaley] ilay Praiminisitra nepaley vaovao M. Nepal :
23 Jona 2021Azia Atsimo